‘भीआईपी’लाई कति छ सुरक्षा चुनौति, जम्बो सुरक्षाकर्मीको टोली आवश्यक नै छ त ? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS POLITICS ‘भीआईपी’लाई कति छ सुरक्षा चुनौति, जम्बो सुरक्षाकर्मीको टोली आवश्यक नै छ त ?
‘भीआईपी’लाई कति छ सुरक्षा चुनौति, जम्बो सुरक्षाकर्मीको टोली आवश्यक नै छ त ?
भीआइपी अर्थात् राज्य सञ्चालनको विशिष्ट पदमा रहेका र रहिसकेका व्यक्ति । जसलाई सरकारले ‘थ्रेट’ मूल्यांकन गरी विशेष सुरक्षा दिएको छ । सर्वसाधारणको आवत–जावतमा समेत असुविधा पर्ने गरी यसरी अघिपछि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो ताँती लिएर हिड्छन् भीआइपी ।
केहीदिन अघि पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षामा खटिएको पछुवा गाडीले स्कूटरलाई ठक्कर दिएर लडाएको ‘भिडियो’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो ।
र, यसैलाई आधार मानेर सर्वसाधारणले भीआइपी सुरक्षाका नाममा भइरहेको भद्दा अभ्यासले असुरक्षा बढेको भन्दै नागरिकले सामाजिक सञ्जालमै उछित्तो काढे ।
भीआइपीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीः ५५०
सशस्त्र प्रहरीको सवारी साधनः २७
नेपाल प्रहरीको सुरक्षा निर्देशनालयमा खटिएका प्रहरीः करिब ६ सय
हाल भीआइपीको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीः २८०
नेपाल प्रहरीको सवारी साधनः २८ वटा
भीआइपी जो देशका विशिष्ट व्यक्ति हुन्, जसको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, कतिपयले सुरक्षा थ्रेट विना नै समाजमा आफ्नो सान र प्रभाव देखाउनकै लागि सुरक्षा लिने गरेका छन् ।
भीआइपीको सुरक्षाका नाममा ठूलो जनशक्ति र रकम दुरुपयोग भइरहँदा सँगै प्रश्न उठ्छ कि साँच्चै विशिष्ठ व्यक्तिहरु यति धेरै असुरक्षित छन त ? छैनन् भने विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि गरिएको प्रबन्धको औचित्य पुष्टि हुँदैन । सुरक्षा आवश्यकता हो । शान, सौकत प्रदर्शन गर्ने माध्यम होइन ।
न्युज २४ बाट साभार गरिएको